Manchester City Oo Loo Tilmaamay Beddelka Saxda Ah Ee Sergio Aguero Oo Kasii Socda Etihad Stadium - Gool24.Net
Manchester City Oo Loo Tilmaamay Beddelka Saxda Ah Ee Sergio Aguero Oo Kasii Socda Etihad Stadium
Halyeygii hore ee kooxda Manchester United, Owen Hargreaves ayaa farta ugu fiiqay tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa beddelka saxda ah ee weeraryahanka reer Argentine ee Kun Sergio Aguero oo heshiiskiisa Etihad Stadium sii dhamaanayo, loona badinayo inuu ka tegi doono England.
Hargreaves ayaa aaminsan in Weeraryahanka Kooxda Inter Milan ee Martinez uu yahay beddelka saxda ah ee Sergio Aguero kadib badhiggii cajiibka ahaa ee laacibkani uu ka sameeyey kulankii semi-finalka tartanka Europa League ee ay ku garaaceen Shakhtar Donetsk oo uu dhaliyey laba gool, isla markaana xili ciyaareedka oo dhan saxeexay 21 gool iyo 7 gool oo kale oo uu caawiye ka noqday.
22-jirkan reer Argentine ayaa waxaa indhaha ku wada haya kooxaha ugu tunka weyn horyaalada Yurub oo ay ugu horreyso naadiga xaaladdu ku xun tahay ee Barcelona taas oo aad u dannayneysa laacibkan si uu ugu beddelo Luis Suarez oo ay da’diisu weynaatay, uguna darsameen dhaawacyo.
Kaddib Dood dheer oo halyeeyada kooxaha Barcelona Iyo Man City ku yeesheen istuudiyaha BT Sport kulankii Inter Milan iyo Shakhtar kaddib, laacibkii hore ee kooxda Man City iyo Man United Owen Hargreaves ayaa soo jeediyay in Martinez uu yahay beddelka saxda ah Sergio Aguero.
Owen Hargreaves oo ka hadlayey weeraryahanka Inter Milan ayaa yidhi: “Waan ogahay in Manchester City ay raadineyso beddelka Aguero, Martinez waa shaqsiga kaliya ee beddelka u ah. Waa mid wax walba leh, Waa ciyaaryahan farsamo yaqaan ah, oo halis ah. Waa mid dhameystiran oo haddana 22 sano jir kaliya.
“Waa nooca ciyaaryahan ee saxda ah, ha ahaato Barcelona ama Manchester City dhabtii waxay heli doonaan ciyaaryahan khaas ah.”
Si kastaba, Lautaro Martinez ayaa in muddo ah ay diiraddu u saarnayd Barcelona oo dhowaan uu Madaxweynaheedu caddeeyey in marka ay dhamaadaan tartamada Champions League iyo Europa League ay la hadli doonaan Inter Milan, halka ay jiraan warar ku xidhiidhinaya Man City oo aan wali si dhab ah uga hadal.